Appil saffisa bilbila 'iPhone' moodeelota durii xiqqeessuu isaaf dhiifama gaafate - BBC News Afaan Oromoo
Appil saffisa bilbila 'iPhone' moodeelota durii xiqqeessuu isaaf dhiifama gaafate
Goodayyaa suuraa Kaampaanichi 'amantaa maamilaa deebifachuuf' hojiilee garaagaraa hojjechaa jira
Kaampaaniin Appil saffisa Aayifoonii (iphone) moodeelota durii xiqqeesuu isaatiin komii irratti kaa'aa tureef dhiifama gaafateera.
Kaampaanichi amma gatii baatirii haaraa bakka buusuuf kanfaltii gaafatamu hir'isuun bara 2018tti ammoo soofti weerii maamiltoonni fayyummaa baatirii isaanii itti hordofan baasuuf akka ta'e beksiseera.
Maamiltoonni tokko tokko Kaampaanichi saffisa Aayifoonii moodeelota durii kan xiqqeesseef gurgurtaa moodeelota haaraa dabaluu barbaadeeti shakkii jedhu qabu.
Bilbili Aappil tokko tokko baatiriin isaanii dulloomaa waan ta'eef, gabaan ala gochuu amanuun kaayyoon isaa tajaajila yeroo dheeraa akka kennan gochuu ta'uu ibseera.
Dhaabbatichi ergaa marsariitii isaa irratti maxxanseen bilbiloota Aayifoon 6 (iPhone 6 ) wabummaan isaanii darbeef baatirii haaraa bakka buusuuf kanfaltii gaafatamu $79 gara $29 gad buusuu hubachiiseera.
Kaampaanichi ''rakkoole maamilaa furaa, amanamummaa isaan waliin qabu cimsaa, fedhe Aappil irraa warreen shakkii qaban waliin wal amantaa jiru cimsuuf ejjenoowwan fudhachaa akka deemu'' beksiseera,
''Appil keessatti amantaa maamiilli keenya nurraa qabu jechuun nuuf waan hunda jechuu. Amantaa isaanii argachuu fi cimsuuf tattaafiin goonu hin dhaabatu. Hojii jaallannu kana kan hojechaa jirruuf deeggarsaa fi amantaa isin nurraa qabdan irraa kan ka'e dha. Kana yoomiyyuu hin dagannu, akka salphaattis hin laallus'' jedha dhaabatichi.
Appil bilbiloota isaa tokko tokko irratti rakkoo mudateen wal qabatee Ameerikaa keessatti qaamota garaagaraa saddeetiin himanni irratti banameera.
Israa'eelii fi Faraansaayittis dhimmi seeraan qabame jira.
Goodayyaa suuraa Appil sooftiweerii haaraa maamiltootaaf odeefannoo waayee haalaa baatirii bilbila isaanii kennuufii omishuufi
Sirna raawwii iOS irratti fooyya'iinsa gochuun baatirii liitiyeem Aayoonii bilbiloota irra jiru cimsuuf hojjechuu isaas beeksiseera.